Nampitombo Avo Roa Heny Ny Trangan’Extremisma ao Rosia ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2014 15:38 GMT
Araka ny tatitra nataon'i Izvestia izay nanatsonga antotanisa avy ao amin'ny Fitsarana Tampony Rosiana, naharay raharahan-keloka bevava mifandraika amin'ny andinin-dalàna miresaka “extremisma” faha-280 sy faha-282 miisa 260 ny fitsarana tamin'ny 2012, ary olona 208 no voaheloka ho nanao extremisma. Tamin'ny 2013 niakatra ho 402 izany isa izany ary olona 309 no voaheloka.
Nanambara ihany koa i Kuznetsov fa lasa tsy mavitrika an-tserasera loatra intsony ny Rosiana Nasionalista, raha naka ny toerana banga kosa ny Okrainiana.
Nanao ezaka hamerana ny fahalalahana an-tseraseran'ny olom-pirenena ao aminy i Kremlin tao ho ao, ary iray amin'ny ohatra maro azo raisina hanaovana ny fangejana ny fampidirana ny lahatsoratra “extremista” ho ao anatin'ny lalànan'ny heloka bevava sy ny fampiharana azy ao amin'ny votoaty an-tserasera. Fandraisana an-tanana hafa malaza ihany koa ny lalànan'ny blaogera mitaky amin'izay rehetra manana mpamaky mihoatra ny 3000 isan'andro ho anaty ny rejisitry ny governemanta, ny lalànan'ny fitazonana rakitra manokana manery ny haba-tranonkala hitahiry ny rakitra mombamomba ny Rosiana ao anatin'ny firenena, ary ny tena tafahoatra tsy nisy fahamalinana dia ny tolo-kevitry ny politiana sasantsasany, tahaka ny antso hiomanana amin'ny Aterineto mahazaka tena ao Rosia.
Raha hita ho misy fanjohin-kevitra mazava ny famelabelaran'ny manampahefana amin'ny fitomboan'ny fiampangana ny extremisma, dia hita ao amin-dry zareo ihany koa ny fanaratsiratsiana ny aterineto ho sehatra mbola tsy misy lalàna, tsy voaaro ary mila fanaraha-maso sy fifehezana kokoa mba hahafahany miodina soa aman-tsara. Hita ho paikady fampitahorana mety handrava ny fanirian'ny Rosiana maro hamoaka hafatra mitsikera ao amin'ny blaoginy sy ao amin'ny pejiny, na hamelana azy ireo hizotra amin'ny lalana tsy tian'ny mpitondra ny fisian'ireo tenimiafin'imailaka niporitsaka, ny fanakatonan'ny VKontakte ireo kaonty maro manana fifandraisana amin'ny ISIS, ary ny fampiasana tsy amim-pahamendrehana ataon'ny miaramila rosiana [mg] ny tambajotra sosialy mampiharihary ny fidiran-dry zareo any Okraina, ny fieloelon'ny “extremista an-tserasera,” ary ny kotaba manodidina ny Okrainiana nationalista sy ny fandaharan'asan'ny elatra politika farany havanana. Tahaka ny ahoana moa izany ny tahotry ny Rosiana manampahefana amin'ny fijoroan'ny aterineto malalaka ary mbola ho hita hoe tahaka ny ahoana ny ataon-dry zareo hampitahorana ny mpisera Rosiana hanaovany izay hahafaly ny mpitondra.